John Mpanao Batisa, Fiangonana Eran-tany Eran-tany Switzerland (WKG)
Ny hafatr'i Jaona Mpanao Batisa dia miharihary. Mitovy amin'ny radikaly ny fomba fanaony. Nanondrika ny olona ao anaty rano izy. Ny fombany dia lasa ampahany tamin'ny anarany - Jaona Mpanao Batisa. Tsy fanaovana batisa anefa izany. Ny batisa dia fomba fanao mahazatra ela talohan'ny nisehoany. Inona no nihetraketraka, izay nataony batisa. Ny batemy dia iray amin'ireo fepetra takiana amin'ny filazan'ny mpanompo sampy ho lasa Jiosy, miaraka amin'ny famorana amin'ny famorana sy ny tempoly ary ny fepetra maro hafa.
Fa i Jaona dia tsy niantso ny olona ho mpitory proselyta taloha mba hatao batisa, fa koa ny vahoaka voafidy, dia ny Jiosy. Ity fihetsika mamohehatra ity dia manazava ny fitsidihan'ny vondron'ireo pretra, Levita ary Fariseo tany an-tany efitra. Jaona dia tamin'ny fomban'ireo mpaminanin'ny Testamenta Taloha. Nantsoiny tamin'ny fiara fitaterana ny olona. Nomelohiny ny fahalovana nataon'ny mpitarika, ary nampitandrina ny amin'ny fitsarana ho avy izy ary nanambara mialoha ny fahatongavan'ny Mesia.
Amin'ny geografika dia nipetraka teo amin'ny sisin'ny fiaraha-monina i John Mpanao Batisa. Ny asa fanompoany dia tany an-tany efitra anelanelan'i Jerosalema sy ny Ranomasina Maty, tontolo be vato sy malefaka nefa maro no nandeha hihaino ny toriteniny. Amin'ny lafiny iray, ny hafany dia mitovy amin'ny an'ny mpaminany taloha, saingy amin'ny lafiny hafa kosa dia radikaly izany - ilay Mesia nampanantenaina dia efa teny an-dalana ary tsy ho ela dia ho eo! Jaona dia nilaza tamin'ireo Farisiana izay nanontany ny fahefany fa tsy avy aminy ny fahefany - mpitondra hafatra ihany izy hanomana ny lalana hanambarana fa teny an-dalana ny mpanjaka.
Tsy nanao ezaka i Johannes hampiroborobo ny tenany - nanambara izy fa ny hany andraikiny dia ny fanaovana batisa ho an'izay ho avy ary iza no hanao azy. Ny hany asany dia ny fanomanana ny sehatra ho an'ny fisehoan'i Jesosy. Ary rehefa niseho Jesosy, dia hoy i Jaona: "Indro ny Zanak'ondrin'Andriamanitra izay manota izao tontolo izao." Ny fahotana tsy alaina amin'ny rano na amin'ny fanaovana asa tsara. Nesorin'i Jesosy izy ireo. Fantatsika izay mihodina amin'ny fiara fitateram-bahoaka. Fa ny fanontaniana lehibe kokoa dia ny hoe iza no kendren'ny fiara fitaterantsika.
Nilaza i Jaona fa Andriamanitra no naniraka azy hanao batisa amin'ny rano - mariky ny fanadiovana ny fahotantsika ary miala amin'ny ota sy ny fahafatesana isika. Hisy batisa anefa, hoy i Johannes. Ilay ho avy aoriany - Jesosy - hanao batemy miaraka amin'ny Fanahy Masina, fanondroana ny fiainam-baovao ao amin'i Kristy izay noraisin'ny mpino amin'ny alàlan'ny Fanahy Masina.